भाजपाले यस कारण जित्यो चुनाव ? मजदुरको खुट्टा धुनेदेखि, हिन्दुधर्मको नारासम्म ! – Sagarmatha Online News Portal
भाजपाले यस कारण जित्यो चुनाव ? मजदुरको खुट्टा धुनेदेखि, हिन्दुधर्मको नारासम्म !
एजेन्सी । भारतमा भर्खरै चुनाव सकिएको छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले बहुमत ल्याएर सरकार समेत गठन गरि राज्य सञ्चालनमा छ । तर भाजपाले बहुमत ल्याउनुको पछाडि कारण अर्कै छ ।
त्यो कारण हो चुनावको मुखैमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुम्भमेलामा गएर मजदुरहरुलाई सम्मान गर्दै उनीहरुको खुट्टा धोएर अप्रत्यक्ष रुपमा भोट मागेका थिए । देख्नेलाई त वाह ! प्रधानमन्त्री मोदीले मजदुरको खुट्टा धोए भन्ने सबैलाई लाग्न सक्छ । तर, त्यसो गर्नुको कुटनैतिक कारण भनेको भाजपालाई भोट हाल भन्नुनै हो । अर्को कारण भनेको हिन्दु धर्मको आडमा भाजपाले बहुमत ल्याएको भारतीय राजनीतिज्ञहरुको भनाई छ । भारतमा आधाभन्दा बढि जनसंख्या हिन्दु धर्म मान्छन् । उनीहरुलाई धर्मको नारा दिएर चुनाव जितेको विपक्षी दलका नेताहरुको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले कुम्भमेलामा सरसफाई गर्ने मजदुरहरुको खुट्टा धोइदिएका हुन् । ‘स्वच्छ कुम्भ स्वच्छ आभारु’ कार्यक्रममा उनले सरसफाइ कर्मचारीहरुलाई सम्मान गर्दै खुट्टा धोइदिएका थिए । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा उनले दुई जना महिलासहित ५ जनाको खुट्टा धोएका थिए ।
मोदीले मजदुरको खुट्टा धोए ! त्यसपछि पुछे ! ढोगे, अनि खादा ओढाइदिएका थिए । भारतीय जनताले पार्टीले मोदीले सरसफाइ कर्मचारीहरुको खुट्टा धोएको भिडियो सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत सार्वजनिक गर्दै भोट दिन अपिल गरेका थिए ।